PSJTV | कोरला नाकामा सुरक्षा बन्दोबस्तको तयारी
समथर भू–भाग । उजाड फाँट । हिमाली मरुभूमिलाई आंशिकरुपमा हिमालबाट घेरिएको छ । समथर फाँटमा ‘नेपाल’ लेखिएको २४ नम्बरको स्तम्भ ठडिएको छ । नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको यो स्तम्भ नै नेपालतर्फको एकमात्रै देखिने चिनारी हो । स्तम्भको अगाडि धमाधम चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार बनाइरहेको छ ।
द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘कोरला नाका’मा चिनियाँ पक्षले भन्सारलगायतको प्रयोजनका लागि विशाल भवन निर्माण गरिसकेको छ । सिमानामा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै चीनले सुरक्षाका लागि पुलिससँगै सीमानजिकै सेनासमेत परिचालन गरिसकेको छ ।
नाका सन्चालनकै लागि चिनियाँ पक्षबाट नाकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेको छ । यहाँ नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माण सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सन्चालनबारे चौतर्फी चासो बढेपनि नाका सन्चालनका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिम्जिङ दोर्जे विष्टले बताए ।
‘नाका सन्चालनको चासो सबैतिर छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नो अभिन्न एजेन्डा बनाएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारकै चासो रहनु जरुरी छ’–विष्टले भने । अहिले कोरला नाकामा २४ नम्बरको स्तम्भबाहेक सिमानामा नेपाली पक्षको कुनैपनि संरचना छैन ।
सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माण र प्रबन्ध नहुँदा नाका सन्चालनबारे आशंका उत्पन्न भएको पोखराबाट कोरला नाकामा पुगेका बलबहादुर थापाले बताए । ‘चीनले आफ्नो भूमिलाई तारबार गरेर सुरक्षा गरेको छ । सुरक्षाको प्रबन्ध सँगै भवनहरु पनि बनाइसके । हाम्रो भूमिमा न त सीमामा सुरक्षा गस्ती छ, न राष्ट्रिय झन्डा नै फहराइएको छ’–उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुईपटकमात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँ व्यापारीले सामान किनबेच गर्दै आएका छन् ।
यो नाकासँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगन्डकी करिडोर जोडिने भएकाले नाका सन्चालनमा आए मुस्ताङमात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तरदेशीय व्यापार र पारवहनको भरपर्दो ‘भाग्यरेखा’ तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको कोरला नाकामा लोमन्थाङ गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माण गर्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माणका लागि रु एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष विष्टले बताए । उनकाअनुसार कोरला नाकामै आकर्षक द्वार बनाउने तयारी गरिएको छ । हिमाली मरुभूमि र हिमशृंखलाको अवलोकनका लागि नाकासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्नेक्रम बढेपछि प्रदेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको हो ।
‘कुराले मात्रै नाका खुल्दैन’
कोरला नाका सन्चालनका लागि कामभन्दा बढी कुरामात्रै भएको लोमन्थाङका स्थानीयवासीको गुनासो छ । मुस्ताङको मात्रै नभएर साविक धवलागिरि क्षेत्रसँगै गण्डकी प्रदेशकै भाग्यरेखा मानिएको यस नाका सन्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुस्तता प्रमुख समस्याकोरुपमा देखिएको लोमन्थाङका स्थानीय अगुवा ज्ञानेन्द्र विष्टले बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका विष्ट नाका खुलाउने सन्दर्भमा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कोरला रणनीतिक र व्यापारिक महत्वको नाका हो । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सन्चालनमा ल्याउनसके यसले मुलुककै लागि हित गर्छ । नाका खुल्ने आशा त छ तर, पूर्वाधार नभएसम्म कुराले मात्रै नाका खुल्न सक्दैन’–विष्टले भने ।
नाकालाई लक्षित गरी चीनले ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेको भएपनि नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।
‘चीनले सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । अब नेपाली पक्षले पूर्वाधार निर्माण र एक चीन नीतिमा विश्वस्त बनाउन सक्यौं भने कोरला नाका निकट भविष्यमै खुल्नसक्छ’–उनले भने ।
केही समयअघि भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण टोलीमासमेत सहभागी तुलाचनले चिनियाँ पक्ष कोरला नाका सन्चालन गर्न आतुर रहेको पाएको बताए ।
नाका सन्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनी बताउँछन् ।
सरकारले कोरलासँगै चीनसँग जोडिएका चारओटा नाका पुनः सन्चालनमा ल्याउन भित्रीरुपमा आवश्यक कार्यलाई अघि बढाएको प्रतिक्रिया पाएको तुलाचनले जानकारी दिए ।
नाका परिसरमा एकीकृत भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।
सशस्त्रको पोस्ट स्थापना गरिने
कोरला नाका सन्चालनका लागि पूर्वाधारसँगै सुरक्षा बन्दोबस्तलाईसमेत अघि बढाइएको छ ।
अहिले लोमन्थाङमा सीमा प्रहरीचौकी र छोसेरको नेचुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ ।
सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि १४ किलोमिटरयता नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार ‘बोर्डर आउट पोस्ट’कोरुपमा सशस्त्रको पोस्ट राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत् निर्णय भइ गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ ।
तत्काललाई सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नेचुङ भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको बुझिएको छ ।
तिहारलगत्तै पोस्ट राख्ने तयारी गरिएको छ । उक्त पोस्टले सीमास्तम्भको सुरक्षासँगै राजश्व चुहावट रोक्न गस्ती गर्नेछ । पोस्टका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ ।
नेचुङमा सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी, भन्सार, जाँचस्थललगायतका छुट्टाछुट्टै भवनका लागि १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भू–भागमा पर्ने लोमन्थाङको लुंखुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना भइककेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले लोमन्थाङस्थित सीमा प्रहरीचौकीलाई ‘क’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयकोरुपमा स्तरवृद्धि गर्न र इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरलाई सीमा प्रहरीचौकीकोरुपमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए ।
चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगन्डकी करिडोरअन्तर्गत् बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त छ ।
कोरला नाका सन्चालनको बलियो आधारकोरुपमा लिइएको यो सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनामा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत् बेनी–जोमसोमको ७६ किलोमिटरको सडकमा विभिन्न चारओटा ‘प्याकेज’मा सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएपनि निर्माणकार्य सुस्त छ । यसखन्डमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
सडक स्तरोन्नतिको योजनालाई गति दिन आयोजना र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।
बेनी–जोमसोमखन्डसँगै जोमसोम–कोरलाखन्डको सडक स्तरोन्नति कार्यसमेत सुस्त छ ।
११० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरलाखन्डमा सातओटा प्याकेजसहित निर्माणकार्यलाई अघि बढाइएको भएपनि समर–भेंगे र चराङ–छोसेरखन्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त रहेको तुलाचनले जानकारी दिए ।
छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर स्तम्भसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काममात्रै सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक र जोमसोम–कोरला सडक ११/११ मिटर चौडाइका हुन् ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्ती प्रक्रियामा, यस्ता छन् आरोप
नीलम शाहले यसकारण गरेकी रहिछन् रामकृष्ण ढकालसँग ‘डिभोर्स’
सर्लाहीमा श्याम परदेशीभन्दा खुंखार साहुकार फेला, न्याय माग्दै पीडित काठमाडौँमा
30th Nov 2019 पिएसजे न्युज
१२ वर्षअघि रुकुमबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न र कलाकार बन्न ज्योति मगर काठमाडौं आएकी थिइन्। रोल्पा नुवागाउँमा जन्मिएकी उनले काठमाडौं आएर गायन यात्रा थालिन्। केही समय नृत्य कलाकारका रूपमा काम पनि गरिन्। त्यस ...
10th Dec 2019 पिएसजे न्युज
‘यौन हिंसा भनेको के हो? कसरी हुन्छ? हिंसामा परेका महिलाले कसरी व्यक्त गर्ने? कोसँग, कहाँ गएर हिंसामा परे भनेर गुहार्ने? यी प्रश्नको जवाफ छ?’ गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले तेस्र्याएका प्रश्न ...